बाबुराम भट्टराई पुन: कम्युनिस्ट ! :: सुदीप श्रेष्ठ :: Setopati
बाबुराम भट्टराई पुन: कम्युनिस्ट !
माओवादी छाडेर नयाँ राजनीतिक शक्ति निर्माणको तयारी गरिरहेका बाबुराम भट्टराईले २०७२ माघ ६ गते आफ्नै निवासमा केही पत्रकारसँग अन्तर्क्रिया गरे। उनले आफ्नो नयाँ पार्टी कम्युनिस्ट विचारधाराको नहुने भन्दै राजनीति तरंगित पारे।
नभन्दै भट्टराईले आफ्नो पार्टीको नाममा मार्क्स, लेनिन वा माओ कुनै कम्युनिस्ट नेताको नाम जोडेनन्। नाम राखे- नयाँ शक्ति पार्टी नेपाल।
जब देवेन्द्र पौडेल, रामचन्द्र झा लगायत नेताहरु माओवादी छाडेर नयाँ शक्ति पार्टीमा ध्रुवीकृत हुन थाले, भट्टराई आफ्नो नयाँ शक्तिलाई 'वाम झुकाव' भएको दलका रुपमा परिचय दिन बाध्य भए। यति गर्दा पनि उनले पार्टीलाई वाम राजनीतिक दलको कित्तामै भने उभ्याएनन्। पार्टीको नारा पनि समृद्धिलाई बनाए।
पहिलो र दोश्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचन आयो। नयाँ शक्ति उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम नेपालको मसाल चिह्न लिएर चुनावमा होमियो। तर, पार्टीले भट्टराईकै गृहजिल्ला गोरखामा समेत साख जोगाउन सकेन।
चुनावमा पराजित भएपछि पार्टीभित्र एकता भाँडियो। माओवादी छाडेर आएका पौडेल, झा, वामदेव क्षेत्री लगायत नेता उतै फर्किए। भट्टराई एक्लिए। उनको पार्टीमा माओवादीबाट गएकाहरुले लाल सलामसमेत भन्न पाएनन्। पार्टी छाड्दै गर्दा पौडेलले यही गुनासो माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसमक्ष गरेका थिए। तर मंगलबार एकता घोषणासभामा भट्टराई आफैँले लालसलाम गरे।
यसरी एकता प्रक्रिया र स्थानीय निर्वाचनमा असफल हुँदै सहयात्रीले समेत साथ छाडेपछि अलपत्र भट्टराई अन्तत: फेरि 'कम्युनिस्ट' बनेका छन्। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालसँगै उनले मंगलबार वामपन्थी दलहरुको चुनावी गठवन्धन र त्यसपछि विधिवत् पार्टी एकता गर्ने सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरे।
सहमतिपत्रमा भनिएको छ- 'हाम्रा आफ्नै अनुभव र जनता एवं राष्ट्रको आवश्यकतालाई हृदयंगम गर्दै नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र र नयाँ शक्ति पार्टी नेपालबीच एकीकरण गरी एउटै कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्न सहमत भएका छौं।'
यो घटनाले राजनीतिमा वैकल्पिक शक्तिको वकालत गरिरहेका भट्टराई घुमाउरो बाटोबाट पुरानै राजनीतिक कोर्समा फर्किएको देखाउँछ।
अझ स्थानीय निर्वाचनमा आँखा चिह्न नपाएको भन्दै निर्वाचन आयोगमा धर्ना दिन पुगेका भट्टराई एमालेको चुनाव चिह्नमा लड्नधरि राजी भएका छन्। यसले भट्टराईलाई अब गोरखामा उम्मेदवार बनाउन एमाले अध्यक्ष ओलीले हस्ताक्षर गरेर सही छाप ठोक्नुपर्नेछ।
यति हुँदाहुँदै भट्टराईले मंगलबार कार्यक्रममा आफ्नो पार्टीलाई प्रगतिशीलको कित्तामा उभ्याउने प्रयत्न भने गरे। भने, 'यो कम्युनिस्ट वामपन्थी र प्रगतिशिलबीचको एकता हो।' नाम किटेर नभने पनि भट्टराईले यहाँ नयाँ शक्तिलाई प्रगतिशील कित्तामा उभ्याउन खोजेका हुन्।
एमाले र माओवादीबीच एकताको बहस चलिरहँदासम्म भट्टराईको नयाँ शक्ति अगाडि देखिएकै थिएन। मंगलबार बिहान ललितपुरस्थित एक निजी निवासमा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच छलफल चलिरहँदा पनि भट्टराईको अत्तोपत्तो थिएन। बरु दाहालले बिहानै उपेन्द्र यादवसँग भेटेर एकतामा सहभागी हुन आग्रह गरेका थिए।
त्यसलगत्तै भट्टराई आफैं एमाले अध्यक्ष ओलीको बालकोट निवास पुगेर एकताबारे छलफल गरे। एकता घोषणाको केही घन्टाअघि मात्र भट्टराई वामपन्थी गठवन्धनको हिस्सा बनेका हुन्।
ओली र भट्टराईबीच एउटा संयोग के भने, २०७३ जेठ ३० गते दशरथ रंगशालामा आयोजित नयाँ शक्ति घोषणा सभामा ओलीले 'नयाँ शक्तिले एमालेबाहेकका शक्तिलाई धक्का दिनसक्ने' बताएका थिए।
ओलीको भनाइ सही साबित भएको छ।
भट्टराईले एमालेकै चुनाव चिह्न लिएपछि अब ओलीले भनेजस्तै उनी र उनको पार्टीले एमालेबाहेकका शक्तिलाई मात्र संघ र प्रदेश निर्वाचनमा धक्का दिनेछ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, असोज १८, २०७४, ०१:३३:४५